Bruno Fernandes oo shaaca ka qaaday kooxda Premier League ka dhisan ee uu doonayey inuu ku biiro xagaagan oo laga horjoogsaday – Gool FM
Bruno Fernandes oo shaaca ka qaaday kooxda Premier League ka dhisan ee uu doonayey inuu ku biiro xagaagan oo laga horjoogsaday
(Lisbon) 02 Sebt 2019. Bruno Fernandes ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u ahaa inuu ku biiro kooxda Tottenham Hotspur, laakiin Naadigiisa Sporting Club ayaa diiday soo jeedintooda, maadaama aysan ka soo bixin qiimeyntiisii.
24-sano jirkaan khadka dhexe ee reer Portugal ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono Lisbon xagaaga, kaddib xilli ciyaareedkii wanaagsanaa ee 2018/19.
SHAX WAYAABOOD OO AAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA OGAATO FERNANDES:-
>- Fernandes ayaa Sporting Club kaga soo biiray kooxda Sampdoria sanadkii 2017-kii.
>- Waxa uu dhammaystay xilli ciyaareedkii 2018/19 isagoo dhaliyey 20 gool 33 kulan oo uu ciyaaray kulammada horyaalka.
>- Waxay taasi la micno tahay inuu jabiyay rikoorkii Frank Lampard ee gooldhalinta ugu badan ee uu ka helo khadka dhexe xilli ciyaareed Yurub ah: 27 xilli ciyaareedkii 2009/10.
>- Manchester United iyo Spurs ayaa si xoog leh loola xiriirinayey saxiixiisa, laakiin Red Devils ayaa dalabkiisa sare u qaadin.
>- Spurs ayaa dalbatay laakiin Sporting waa ay diiday, waxaana uu sheegay Fernandes inuu ixtiraamayo go’aankooda.
Fernandes ayaa dhaliyay 20 gool 33 kulan oo uu saftay, halka uu 13 kale u abuuray saaxiibadiisa kooxda, qaab ciyaareedkiisa ayaana la sheegay inuu qabsaday indhaha kooxaha Premier League ee Man Utd iyo Spurs.
Man United ayaa dooratay inaysan dalab u soo bandhigin ciyaaryahanka, laakiin Spurs ayaa dalab ka gudbisay si kastaba ha noqotee, Sporting waxay dareentay soo jeedintaa inay ka gaabisay qiimahooda, isla markaana markii dambe waxa ay go’aansadeen inaysan iibin xiddigan khadka dhexe.
Inkastoo Fernandes uu doonayay inuu dhaqaaqo, haddana waa uu fahmay go’aanka Sporting, waana uu tixgeliyey.
“Sida aad dhammaantiin ka warqabtaan, Tottenham ayaa dhowr dalab iga soo gudbisay, wax waliba sax ayey iila muuqdeen.” ayuu u sheegay GQ Portugal.
“Ma aanan sameyn codsi weyn, tababarahaygu isaga ayaa marwalba la dhiil-gareynayey markay timaado dhanka dhaqaalaha, sidaas ayey ahayd, hadafkeyguna waxa uu ahaa inaan ka dheelo Ingiriiska, Sporting way ogtahay taas, qof walibana wuu ogyahay middaas, waxaana arrintaasi ku xiran shuruudo.”
“Laakiin Sporting way ogsoon tahay in qiimahaasi loo soo bandhigay uusan ahayn mid ku filan, aniguna waa inaan tixgeliyaa go’aankooda.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray.
Xogo yaab leh oo ku saabsan Sergio Ramos, dabeecadiisa khalafsan, codsigii Madaxweynaha Real Madrid bilowgii xirfaddiisa illaa noqoshada halyey caalami ah
Ferdinand oo ka aragti dhiibtay go'aankii ay kaga dhaqaaqeen xiddigaha Sánchez iyo Lukaku kooxda Man United